အဆိုတော်ဝနရဲ့ မင်္ဂလာပွဲဘာကြောင့်ပျက်ရတယ်ဆိုတဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရင်း ဖြစ်ရပ်မှန် – Swel Sone News – NEW
Last modified date February 14, 2019
အဆိုတော်ဝနတို့ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ မင်္ဂလာဆောင်ခါနီးမှ မင်္ဂလာပွဲပျက်သွားကြောင်းကို ဝနချစ်သူကကြော်ညာခဲ့တာပါ။ ဘာကြောင့်ပြတ်တယ်ဆိုတာ ပရိသတ်တွေက သိချင်နေကြပါတယ်။ ဆယ်နှစ်တာတွဲလာတဲ့ချစ်သူတွေမို့ပရိသတ်တွေကလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ အမှန်ဆိုရင်ဖြင့် ဒီနေ့ Valentine Days ဟာဆိုရင်ဖြင့် သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်မဲ့နေ့လေးလဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲဘာကြောင့်ပျက်ရတယ်ဆိုတာဝန ရဲ့ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီး သိအောင် အဖြစ်မှန်ကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်နော်။အဆိုတော် ဝန အ​ကြောင်းဘာမှမသိဘဲ ​ဝေဖန်​​နေကြတဲ့ဟာ​တွေဖတ်​ကြည့်​။
သမိုင်းမုဒိတာအိမ်ယာမှာနေတော့လဲ ကိုဝန က အိမ်ထဲက အိမ်အပြင်တောင်ထွက်လည်တတ်တဲ့လူစားမျိုး မဟုတ်ဘူး။ သူ့သက်ဆိုင်သူကချစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားလုံးလှလှလေးနဲ့ စိတ်မချလို့ပါဆိုပြီး အပြင်သွားရင်ကိုဝန ကို အခန်းထဲသော့ခတ်ပြီးထားခဲ့တာမျိုးတွေ လူတွေမသိကြသေးဘူး။ လင်မယားအရာမရောက်သေးပေမဲ့ အိမ်ပေါ်တက်နေတဲ့ သူ့သက်ဆိုင်သူကို ဇနီးလိုသဘောထား ရှာသမျှပိုက်ဆံအကုန်အပ်ပြီး ပိုက်ဆံလိုရင်လက်ဖြန့် တောင်းသုံးရတဲ့ လက်ဝေခံ အဆိုတော်ကြီးအဖြစ်သူ့ရဲ့လူမသိသူမသိဘဝမှာ အချစ်တစ်ခုထဲနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေဝိုင်းနေလဲ သူ့အချစ်နဲ့သူမလဲခဲ့ဘူး။၁၀ ဖို့ ၁ ဖို့စာလောက် ရှာလို့ရသမျှငွေလေးတွေထဲကသူအဆိုတော်ဖြစ်အောင် ရုန်းကန်ပေးခဲ့တဲ့ သူချစ်တဲ့
အမေ နဲ့ သူ့မိသားစုကို တစ်လ ၁၀ သိန်းလောက်ပဲပေပးရပေမဲ့ သူနောင်တမရနိုင်ခဲ့ဘူး။ အချစ်က သူ့ကို ကန်းစေခဲ့တယ် ။
ရှိုးပွဲဆိုသမျှ ပိုက်ဆံရသမျှ သက်ဆိုင်သူကအကုန်သိမ်းဆည်းပြီး စီမံနေတာကို သူ့ကိုချစ်တာပဲလို့သူလက်ခံခဲ့တယ် မတရားသဖြင့် နိုင့်ထက်စီးနင်းပြောရင်လဲ သူ့သက်ဆိုင်သူ ဘွဲ့ရပညာတတ်မကြီးရဲ့အပြောကို ပညာရေးတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ ပြည်သူချစ်အဆိုတော်ကြီး လူမသိသူမသိ ငြိမ်ခံနေခဲ့ရတာတွေသူ့ပါးစပ်ကထုတ်မပြောခဲ့ဘူးတဲ့။ကြားရတော့စိတ်တောင်မကောင်းဘူးမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ၂ ရက်အလိုလောက်ကသတို့သမီးအလောင်းအလျာက မျက်နှာပေါင်းတင်ဖို့ဆိုပြီး ခေါက်ဆွဲတစ်ထုတ်ပြုတ်ပေးပြီး အခန်းထဲသော့ခတ်ထားခဲ့ရတာကိုခံခဲ့ရတဲ့သူ သူ့အဖြစ်ကိုလူသနားအောင်ငိုမပြတတ်ခဲ့ဘူး။ကိုယ်တွေကိုအဲ့လိုလာလုပ်ရင်ကျိန်းသေတယ်
ကိုယ်တွေတော့ ခင်ဗျားလိုသီးခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုဝနရေ ။
အဲ့ညက သူအိမ်ပြန်လာတော့ကိုယ့်ရှေ့မှောက်မှာ အမေကိုရစရာမရှိအောင်ပြောမိသားစုကိုစော်ကားနေတော့ ၊ လူပဲ ဘယ်သူနေနေစိတ်ရှိတယ် ခင်ဗျားအနေနဲ့လဲစိတ်တိုမှာပဲလေ တော်တော့ မင်းဆက်မပြောနဲ့တော့ဆိုပြီး ကက်ကက်လန်ရန်တွေ့နေတဲ့ သက်ဆ်ိုင်သူကိုတွန်းအဖယ် ထိမိတဲ့ action က နာကျင်စေလို့တဲ့ခင်ဗျားကတောင်းပန်ရဦးမတဲ့လား?
ကိုယ့်စိတ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်မဒိမ်းကျင့်ပြီးကိုယ့်မိသားစုကိုပါအခါခါဗလက္ကာရ လုပ်နေတဲ့သူတွေမှာ အမှားမရှိတော့ဘူးတဲ့လား။ရတောင်မရသေးဘူး အမေအိုကို လုပ်ကျွေးနေတဲ့သားတစ်ယောက်ရဲ့ ဆန္ဒကိုပိတ်ပင်ဖို့ကစလာပြီ။ ငွေဆယ်သိန်းပေးရတာတွေ မြင်လာပြီ နောက်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ခင်ဗျားလဲတွေးမှာပဲ ကျွန်တော်လဲတွေးမှာပဲ ။အန်တီကတော့ပြောရှာတယ် သူအရင်ကလိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နဲ့ အဝတ်ပဲလျှော်စားတော့မယ်သားရယ်… တဲ့ ၊ ခင်ဗျားရင်မနာဘူးလား? ကျွန်တော်
မင်္ဂလာဖိတ်စာမှာလဲ ဘယ်သူ့မှအသိမပေးပဲမိဘကအစ ကချင်နာမည်တွေပေးပစ်တယ် အကိုကလဲ ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့ ဝနအပြင် နာမည်
အသစ်ကြီးတစ်ခုနဲ့ နော်မင်းအောင်လ တဲ့လား?ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလဲမင်္ဂလာဆောင်ချင်တယ် ပြောတော့ သူငြင်းသတဲ့
လားငါ့အကို ရှမ်းစပ်တဲ့သူတွေမို့ ရှမ်းလိုလဲ ဆောင်ချင်တယ်ဆိုတော့လက်မခံပြန်ဘူးတဲ့လား? ဒါတွေထားတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင် ယောက်ျားတိုင်းလိုချင်တဲ့ ရဟန်းဘဝ ကို ခဏယူပါရစေဆ်ိုတော့လဲပိတ်ပင်ပြန်တာပဲတဲ့လား? ဘာလို့အဲ့လောက်သီးခံခဲ့ရတာဗျာ။
နောက်ဆုံး ငွေကိုင်မသုံးပဲဇနီးအရာမြှောက်ရှာတိုင်းရသမျှ အပ်နေတော့ ဝန ဆိုတဲ့ ခင်ဗျားကငအကြီး ငပိန်းကြီးလို့ သူတို့ကထင်သတဲ့လား?
ရိုင်းလိုက်ကြတာ။ နောက်ဆုံး အိမ်ထိလူကြီးတွေခေါ်လာပြီးPower ပြတက်စော်ကားကြတဲ့သူတွေကိုငါနင့်ကိုငါ့အမေနဲ့မလဲနိုင်ဘူး လို့ သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခင်ဗျားပြောလိုက်တယ်ကြားတော့ ကျုပ်ကဝမ်းသာတယ် ငါ့အကို ၊ ကျုပ်တို့ကယောက်ျားတွေအမေကိုချစ်ကြတယ် သမီးတွေဆိုရင်တောင်ချစ်ကြတာပဲမဟုတ်လား? အမေကိုတော့ဘာနဲ့မှ
ဒီအတွက် ဘုမသိဘမသိ လူတွေကခင်ဗျားကိုဝေဖန်ကြဦးမယ် ၊ခင်ဗျားက မေတ္တာထားပြီး မဖြေရှင်းချင်ဘူး မီဒီယာတွေနဲ့စကားမပြောချင်ဘူးဆိုသည့်တိုင် ဘေးကကျုပ်တို့ကဒီပြသနာမှာ balance မညီတာကို ဒီအတိုင်းကြည့်မနေနိုင်ဘူးလေ ။ရန်ကုန်မှာရောက်နေတာကြာပြီ အကိုနဲ့ကျွန်တော်တောင်တစ်ခါမှ အပြင်မှာဆုံကြရတာမှမဟုတ်တာ အကို အလုပ်ကြိုးစားနေလဲ ခေမာသီရိက အကို့အမေအိမ် ဒီထက်ပိုပြီး ကြီးမားမလာခဲ့ပါဘူးသက်ဆိုင်သူတွေရဲ့ တစ်မျိုးလုံးကို သီချင်းဆိုရှာကျွေးနေတဲ့ ငါ့အကို ဝဋ်ကြွေးကုန်ပြီပဲမှတ်ပါဗျာ အန်တီတို့အကိုတို့ အိပ်ယာထဲလဲနေကြတယ်ကြားတော့ စိတ်မကောင်းဘူးတစ်အိမ်လုံး မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဆိုလို့ပိုပြီးစိတ်မကောင်းဘူး ။ဒုတိယအခွေထွက်ဖို့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြာနေရသလဲဆ်ိုတာ အကို့ပရိတ်သတ်တွေရိပ်မိလောက်မယ်ထင်ရဲ့ ရသမျှငွေက စတူဒိ်ီယိုမှကောင်းကောင်းမဝင်ရတာကိုး…။
သာဒီးလူကြီး အရမ်းဖြစ်မြောက်နေတာမြင်ရင်ငါ့အကိုကို အရမ်းသတိရတယ် အကိုလဲထပ်ပြီးတက်လာရမှာ ခုလိုကြန့်ကြာနေတာ အကိုသိပ်ချစ်တတ်ခဲ့လို့ပဲ ခေမာသီရိရပ်ကွက်ထဲဂစ်တာတီးရရင် ပျော်နေတဲ့ ငယ်ငယ်ကထဲကအနုပညာပိုးပါတဲ့အကို့အခန်းဝကစာသားလေးကျွန်တော်မှတ်မိနေတယ် `ဒီအခန်းထဲဝင်လျင်သင့်အတ္တကိုအပြင်မှာ ထားခဲ့ပါ´ တဲ့ ငါ့အကိုရဲ့ဘဝအခန်းထဲမှာ ဒီလိုစာမျိုးဘာလို့ကပ်မထားခဲ့တာလဲ ခုတော့ သူတို့ဖို့ပဲသိတဲ့ အတ္တသမားတွေကြောင့် အားလုံးစိတ်ညစ်နေကြရပြီ။
အဆင်ပြေပါစေဗျာ ငါ့အကိုအခုအကိုသေချာစဉ်းစားလို့ရပြီ ငါက
အမိုက်စားဖက်ရှင်နဲ့ Wolver MDC 2019 ကားပြိုင်ပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ မတ်မတ် သင်ဇာဝင့်ကျော်
ရင်မွှာအလှတရားတွေနဲ့ လည်ပြန်ငေးရလောက်အောင် ညို့အားပြင်းပြင်း ပွဲတက်လာခဲ့တဲ့ မမြတ်လေးရဲ့ ပွဲတက်ဖက်ရှင်
ဒီနှစ်အတွက် နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အလန်းစားဖက်ရှင်ကို ထပ်မံချပြလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
မြင့်မြတ်နဲ့ ရုပ်တင်မကဘဲ အသံပါတူနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဝိုင်းဆဲခံရတဲ့အပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်စွာ ဖွင့်ဟဖြေကြားခဲ့တဲ့ ရှင်မွေလ